Tsy fahampian’ny fotodrafitrasa ho fikarakarana ny fahasalamana any ambanivohitr’i Malawi : na ho faty na ho velona · Global Voices teny Malagasy
Indraindray eny an-dàlana hamonjy klinika no teraka ireo vehivavy.
Mpanoratra Article 19, Kondwani Magombo Nandika (fr) i Pauline Cloes, avylavitra
Voadika ny 23 Oktobra 2020 3:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Français, русский, Español, українська, Esperanto , English
Mphatso Gumulira, 15 taona, miaraka amin'ny zanany lahy Zayitwa ao amin'ny hôpitaly Queen Elizabeth ao Blantyre, Malawi. Sary an'ny Flickr DFID, CC BY 2.0.
Ny 9 Oktôbra 2020 no nivoaka tamin'ny teny anglisy ny lahatsoratra voalohany.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy ato]
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Kondwani Magombo no nanoratra ity tantara ity ho an'ny ARTICLE 19, ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa PROTECT vatsian'ny governemanta britanika vola. Fifanarahana mifampizara votoaty no namerenana namoaka azy etoana.
Tamin'ny volana Jona lasa teo, nandritra ny fifidianana farany teo ny ho filohampirenena ao Malawi, raha nandeha nifidy i Jazira Afiya, vehivavy iray tanora 27 taona, efa niteraka 3, dia zavatra tokana no mba faniriany: mba hanome tolotra fikarakaràna ny ara-pahasalamana any amin'ny toerana onenany izay governemanta vaovao eo.
RAHA HAMAKY BEBE KOKOA : Mbola tandindonin-doza ny zo nomerika ao Malawi na teo aza ny fandresena manan-tantara azon'ny demaokrasia
Monina ao Kanyenga i Afiya, vohitra iray mitoka-monina any amoron'ilay farihy ao Mangochi, distrika mivelona amin'ny fizahantany. Any amin'ny 40 kilaometatra miala amin'ny misy azy vao misy fotodrafitrasa ho an'ny fahasalaman'ny daholobe, ary ny fomba tsotra indrindra hankanesana any dia ny moto-taxi , izay misanda 6 000 kwacha malaoita ( 7 euros latsaka kely) ny sarandalana mandroso sy miverina ; vola be tokoa ho ana tantsaha iray mitady izay hivelomany isanandro toa an'i Afiya.
1 346 kwacha malaoita (1,52 euro) isanandro ny karama farany ambany ao Malawi. Araka izany dia mitovy amin'ny karama dimy andro ny saran'ny moto-taxi.
Diso fantatr'ireo mponina ao Kanyenga loatra raha izany marary maty eny an-dàlana hamonjy hôpitaly izany, na koa ireo vehivavy bevohoka teraka manditra ny dia, na indraindray aza mamoy ny zanany.
Iray tamin'ireo vehivavy nihetsi-jaza teny am-pamonjena hôpitaly i Afiya ary nitolona mafy mba ho tonga ara-potoana tany.
« Nanerana ny vohitra aho no nikaroka moto hofaina, saingy tsy nahita », hoy izy mantsy ny ARTICLE 19. « Tokony ho tamin'ny 3 ora maraina, teraka zazalahy kely aho, tao an-tranoko, ary ireo vehivavy teo amin'ny faritra misy ahy no nanampy ahy. »
« Ny ampitson'io, nahavita nanofa moto aho ary rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly ihany, dia nolazaina tamiko fa tratry ny aretin-tratra henjana be ilay zanako, raha ny fandinihana azy dia noho ny hatsiaka teny an-dàlana. In-dray mipi-maso tahaka izany fotsiny, nafoiko ny zanako », hoy i Afiya nanazava tamin'ny ARTICLE 19.
Ady mafy ho an'ny ankamaroan'ireo teratany ao Malawi ny fahafahana mahazo fikarakaràna ara-pahasalamana, ary indrindra fa ho an'ireo 84% amin'ny vahoaka izay mipetraka any amin'ireo faritra ambanivohitra. Eo afovoan'ireo lavaka lalina mangitsokitsoky ny resaka fikarakarana ny ara-pahasalamana no misy ireo vehivavy sy ankizy izay mila tolotra manokana toy ny : fikarakarana mialohan'ny hahaterahana, ny fikarakaràna ho an'ny reny sy ny zaza latsaky ny dimy taona.
Ny Drafi-pirenena Stratejika II ho an'ny sehatry ny fahasalamàna (2017-2022) [pdf] dfia milaza fa « 56 % amin'ireo vehivavy lehibe malaoita dia mitanisa hatrany ny elanelana manasaraka an-dry zareo amin'ireo fotodrafitrasa fikarakaràna ny ara-pahasalamàna ho toy ny sàkana goavana tsy ahafahana mahazo ireny fikarakaràna ireny ». Zakain'ny rafitra ara-pahasalamàna ny fahavitsian'ny olona afaka misahana izany sy ny tahan'ny fahabangan-toerana: 67%, ho an'ny toeran'ny mpitsabo mpanampy sy any amin'ireo klinika ary ireo toerana teknika ».
Mbola lavitry ny afo ny kitay, tsy mahavaly ny tanjona kendren'ny malaoita sy ny iraisampirenena. Momba izany, ao anatin'ny lalàm-panorenany, mampanantena i Malawi fa « hanome fikarakaràna ara-pahasalamàna sahaza, mifanaraka amin'ireo filàn'ny fiarahamonina malaoita sy ny fenitra iraisampirenena amin'ny resaka fikarakaràna ara-pahasalamàna».
Tanjon'ny Firenena Mikambana sy ny OMS ny hahazoan'ny daholobe fikarakaràna ara-pahasalamàna amin'ny taona 2030.
Noho ireny fahasahiranana ireny, lasa fitaovana fampielezankevitra mahomby nandritra ireo fifidianana faramparany ny resaka tolotra ara-pahasalamàna. Noho ireo andiana fampanantenana nataony, indrindra fa momba ny fanomezana fikarakaràna ara-pahasalamàna ao amin'ny firenena no antom-pandresen'ny governemanta vaovaon'ny fiarahamitantana entin'i Tonse.
Raha miandry fatratra ny governemanta vaovao mba hanatontosa ireo fampanantenany ry Afiya sy ny mpiray vodirindrina aminy, ireo fikambanana avy amin'ny fiarahamonina sivily ao amin'ny firenena kosa mandre ny antsoantson'ireo vondrompiarahamonina ao an-toerana ary mitaky asa fa tsy kabary.
« Amin'ny alàlan'ny “National Advocacy Forum”, mitondra ny anjara birikinay izahay ho any amin'ny governemanta, momba ireo olana manohintohiina ny zon'ny vahoaka », hoy i Emma Kaliya, mpikatroka ho an'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy no sady talen'ny “Malawi Human Rights Resource Centre (MHRRC)”. « Natolotray ny filoha ny fandaharanasanay momba ny fahafahana mahazo fikarakaràna ara-pahasalamàna fototra ho an'ireo vehivavy sy ankizy ».
Angatahan'i Emma Kaliya ny governemanta mba hametraka haingana klinika afaka mifindrafindra toerana handeha any amin'ireo faritra lavitra sy saro-dàlana toa an'i Kanyenga.
« Ireo olana mifandraika amin'ny fikarakaràna ara-pahasalamàna ny reny sy ny zaza dia tokony ho laharam-pahamehana entina mamongotra ny taham-pahafatesana sy ny aretina mitondra fahafatesana, izay tena mbola avo be », hoy i Dorothy Ngoma, mpikatroka sy mpandresy lahatra momba ny fikarakaràna ara-pahasalamàna, izay hatramin'ny 2018, izy no filohan'ny Fikambanana nasiônalin'ireo vehivavy mpitsabo mpanampy sy mpampiteraka ao Malawi.
Angatahan'i Dorothy Ngoma mba hanangana toerana maromaro natao ho fandraisana sy fampiterahana ihany koa ny governemanta, ary hampiditra mpitsabo mpanampy misimisy kokoa, mpitsabo ary ireo mpiasa hafa aminà klinika.
« Tiako ampitaina amin'ny governemanta vaovao fa ny fiarahamonina sivily sy ny vahoaka eto Malawi dia mijery antsika ary tsy hanaiky zavatra hafa ankoatra izay », hoy izy tamin'ny ARTICLE 19.
Milaza ny governemanta fa hanohy hiasa mba hamahàna ireny olana ireny, amin'ny fanombànana ny firotsahana tokony hatao sy ny enti-manana ho atolotra ny olona, indrindra fa ireo faritra ambanivohitra.
Nanambara tamin'ny ARTICLE 19 ny Dr Charles Mwansambo, avy amin'ny ministera misahana ny fahasalamàna ao Malawi, fa : « Efa niketrika drafitra iray izahay, izay mametraka ho laharam-pahamehana ny fananganana fotodrafitrasa ho fikarakaràna ara-pahasalamàna any amin'ireo faritra lavitra sy saro-dàlana, mba hahafahana manatsara ny fahafahana mahazo ireo tolotra fikarakaràna fahasalamàna ho an'ny Malaoita rehetra. Kanefa, tsy afaka ny hihazakazaka araka izay itiavantsika azy isika amin'ny fanorenana satria voafetra ihany ny kitapombola. Miasa manetsika ireo mpiaramiombona antoka eto an-toerana sy any ivelany, araka izany, ny governemanta mba hahafahantsika manangana fotodrafitrasa hafa ».
Ankoatra ny tsindry zakain'ireo tolotra fikarakaràna ny fahasalamàna nandritra ny valanaretina, misy fanbamby vaovao iray goavana manangasanga : ny fitomboan'ny isan'ireo mitondra vohoka sy ny fampanambadiana ankizy. Ny distrikan'i Mangochi dia naharaketana tovovavy miisa 7.400 mitondra vohoka, teo anelanelan'ny Janoary sy Jona tamin'ity taona ity ; nihoatra 1.000 raha oharina amin'io vanim-potoana io tamin'ny 2019.
Manahy ny mety hihasarotan'ny raharaha amin'ny hoavy i Dorothy Ngoma, satria betsaka ireo tovovavy ireo no mety hisafidy ny fanalàna zaza, izay tsy eken'ny lalàna ao Malawi raha tsy hoe tandindonin-doza ny ain'ilay reny.
« Tsy maintsy mivonona isika hanome tolotra ho an'ireo ankizivavy bevohoka nizotra ho amin'ny fanalàna zaza, ary tsy maintsy manohana ireo ray aman-drenin'ireny ankizivavy ireny isika », hoy ny nambarany.
Nandika (fr) i Pauline Cloes